Ụzọ Nyefee iCloud faịlụ ka Android
Ịmafe a ọhụrụ Android ekwentị site na otu agadi iPhone? Ọfọn, ọ pụrụ iyi a obere ike maka gị ka ịgbanwee bụrụ na i nwere ibu nke data na gị iPhone. Ekele, usoro bụ a dum ọtụtụ dị mfe.
Ma usoro adịghị jel ọma ọnụ na ị na-achọ a ọzọ software dị ka MobileTrans aka transfer data n'etiti ihe iOS na Android ngwaọrụ. Apple echekwa niile data na iCloud na gị iCloud ndabere nwere niile gị kọntaktị, ozi, photos, videos, audios, oku na ndekọ na ọtụtụ ndị ọzọ si gị iOS ngwaọrụ. Ma Android adịghị mmekọrịta kpọmkwem na iCloud akaụntụ. Wondershare MobileTrans Enyemaka ị mekọrịta ọhụrụ gị Android ndabere iCloud elu.
Tupu ị malite mmekọrịta, ị na-achọ ndị na-esonụ.
2. Android si eriri USB
Nyefee iCloud ka Android na 1 click
Ebe a bụ otú i nwere ike iji Wondershare MobileTrans nyefee data.
Ị nwere ike ibudata software si Wondershare.com. Software bụ dakọtara na Windows XP na n'elu os. Mepee .exe faịlụ na wụnye ya. Ugbu a jikọọ gị Android ekwentị gị na kọmputa site na USB. Ugbu a dị nnọọ pịa Weghachi Site Backups.
1. banye na gị iCloud akaụntụ
On ọzọ window, họrọ iCloud akara ngosi. Nke a ga-ewe gị na-esote window ebe ị ga-banye n'ime gị iCloud akaụntụ. Tinye aha njirimara na paswọọdụ, ka software ịchọpụta gị iCloud ndabere faịlụ.
2. nbudata iCloud ndabere File
Mgbe iCloud na ite na ọ ga-egosi na ndepụta nke faịlụ na n'aka ekpe. Ugbu a abụọ click na iCloud ndabere faịlụ na nwere ekwentị gị data na ị chọrọ jikọọ ya. A popup ga ogosiri na-arịọ gị na-ekwe ka download. Pịa na Download. Dabere na size nke faịlụ, download ga-nkeji ole na ole.
3. Mmekọrịta iCloud ka Android
Mgbe iCloud ndabere faịlụ ebudatara, na software nwere ike idozi si na faịlụ dị ka kọntaktị, ederede, foto, na ọzọ media. Ugbu a faịlụ dị njikere-agafere on ọhụrụ gị na ekwentị. Ị nwere ike ịlele akwado ụdị faịlụ site na listi. Ugbu a pịa Malite Detuo. Ugbu a na sekọnd ole na ole ị na faịlụ ga-depụtaghachiri ka Android Ngwaọrụ.
Nke a bụ mfe usoro iji mekọrịta niile ụdị data gị Android ngwaọrụ ole na ole dị mfe clicks. Dịghị ihe tricky ma ọ bụ mgbagwoju anya nzọụkwụ. Wondershare MobileTrans Eme niile ọrụ maka gị. The software bụkwa nchebe na ị na-adịghị ka nchegbu banyere ihe ọ bụla nzuzo nchegbu.
Ndị ọzọ karịa iji ọzọ software, ị nwekwara ike iji ọzọ ụzọ ka mmekọrịta gị email, kọntaktị, kalenda.
Olee otú mmekọrịta iCloud email ka Android?
Ị nwere ike iji Email ngwa na android ịgbakwunye gị iCloud akaụntụ email. Ọ dị mfe na ụzọ dị mfe iji nweta gị email na gam akporo. Lee ndị nzọụkwụ na ị pụrụ ịgbaso:
1. Mepee email na ngwa na-aga ọnọdụ si menu. Ugbu a gaa na tinye akaụntụ na enweta na ya. Nke a ga-ewe gị n'ime Mbido nke akaụntụ gị. Tinye gị iCloud email id na paswọọdụ. Ugbu a enweta na Manual ntọlite.
2. Next, họrọ akaụntụ ụdị dị ka IMAP na-abanye na-esonụ nkọwa na nkesa na-abata ntọala na oku nkesa ntọala:
Nkesa na-abata ntọala
- Email address- iCloud adreesị ozi-e
- Username- iCloud email aha njirimara
- Password- iCloud paswọọdụ
Ọpụpụ Server ntọala
- Nche Type- TSL (anabata ndị niile asambodo)
Ugbu a na akaụntụ gị ịtọ dị nnọọ enweta na-esote na-abanye na akaụntụ nhọrọ. Gị ozi ịntanetị ga-scanned na-akpaghị aka na-enweghị i mkpa ime ihe ọ bụla.
Syncing iCloud kọntaktị na Android ekwentị
Ị nwere ike mmekọrịta gị iCloud kọntaktị mfe ka gị Android iji-eso nzọụkwụ
1. Gaa icloud.com na abanye na akaụntụ gị. Ugbu a họrọ niile kọntaktị gị na site na ọnọdụ dị họrọ nhọrọ nke Export vCard. Ugbu a ịzọpụta faịlụ na kwesịrị ekwesị ọnọdụ na gị na PC.
2. emeghe gị Gmail akaụntụ na-aga na kọntaktsị.
3. N'okpuru bubata kọntaktị ị ga-enwe nhọrọ bulite exported vCard. Dị nnọọ bulite ya na pịa mbubata.
Ugbu a kọntaktị gị ga-atụkwasịkwara gị google akaụntụ. Na-eji otu google akaụntụ na gị na Android. The Android ga-akpaghị aka mmekọrịta gị na kọntaktị.
Olee otú mmekọrịta iCloud Kalinda na gị Android ekwentị?
Ezie na e nwere ndị ọzọ ngwa na ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime ya aka mgbe ahụ na-esonụ bụ nzọụkwụ.
1. Long na gị iCloud na-emeghe Kalinda. Mepee ọ bụla Atiya na ị chọrọ mmekọrịta na pịa òkè akara ngosi.
2. New popup ga-apụta na ego Public Kalinda. Nke a ga-egosi a URL malite na Webcal.
3. Copy na URL na n'oge gara aga n'ime ihe nchọgharị gị ma adịghị pịa Tinye. Ana "webcal" na-eji dochie ya "http". Ugbu a pịa Tinye.
4. The faịlụ ga-akpaghị aka ebudatara gị na kọmputa. Ugbu a na-emeghe Google kalenda na-aga Ndị ọzọ kalenda na pịa nwesịrị triangle akara ngosi. N'okpuru na họrọ ibubata kalenda.
5. Dị nnọọ họrọ faịlụ na bulite ya. Họrọ udi nke kalenda na pịa mbubata.
Ugbu a, na-eji otu google akaụntụ na gị na Android na ọ ga-mmekọrịta kalenda ekwentị gị.
Ọ dị mfe nyefee iCloud faịlụ ka Android taa. Ihe niile ị chọrọ bụ iji na-esonụ nzọụkwụ n'elu na ị na-ọma na-aga! Ihe niile ị chọrọ nyefee iCloud faịlụ ka Android bụ nanị igosi na n'elu nzọụkwụ.
> Resource> iCloud> otú nyefee iCloud Files ka Android